Deni oo hoggaanka PSF la furay wada hadallo | KEYDMEDIA ENGLISH
Deni oo hoggaanka PSF la furay wada hadallo
Hoggaanka Puntland Saciid Cabdulaahi Deni, ayaa waqtigan wada hadal hoose la furay reer Diyaano, kuwaa oo ka biyo diidsan in ay wareejiyaan tallada PSF.
BOOSAASO, Soomaaliya- Inkastoo ay weli Boosaaso isku hor fadhiyaan, ciidamada kala taabacsan Deni iyo Ilmo Diyaano, misana waxa uu waqtigan doorbidayaa inuu heshiis hor dhac ah la gaaro reer Diyaano.
Sababta ugu weyn ee Saciid Deni ku riixeyso, wada hadalada uu la billaabay reer Diyaano, ayaa ah sidii ay Boosaaso uga qabsoomi lahayd kuraasta lagu soo dooranayo magaaladaas, oo uu Deni rabo inuu u boobo, sida kuwa Garoowe ay doorashadoodu ka dhaceyso.
Deni ayaa fahansan in sii socoshada xiisadan, ay halis galineyso hamigiisa ku aaddan kursiga ugu sareeya dalka, oo uu u hanqal taagayo, taas oo haddii uu dayaco, fursad u ah kooxda Villa Soomaaliya fadhisa, oo xiisadan gadaal ka riixeysa.
Deni ayaa kolkii hore xalka arrinta PSF u wakiishay, siyaasiyiin ay ka mid yihiin Cumar Cabdirashiid, Faroole Iyo Cabdiweli Gaas, kuwaas oo xiisada sii huriyey, maaddaama aysan ku qanacsaneyn xukunka Deni ee maamulka Puntland.
Saciid Deni oo ay jufo hoose yihiin ilmo Diyaano, ayaa markan xalka arrintan waxaa kala qeyb qaadanaya reerka ay ka soo wada jeedaan, isaga iyo ilmo Diyaano, waana nin diyaar la ah inuu markan fuliyo wax walba oo uu Maxamuud Diyaano ku wareejinayo talada PSF, taas oo suura galin karta in Deni uu gaaro yoolkiisa ku aaddan, in Puntland ay ka soo baxaan xildhibaanno isaga taabacsan.
Sida xogta aan helnay ay sheegeyso, Maalmaha soo socda, ayaa lagu wadaa in labada dhinac ay ku dhawaaqaan heshiis horu-dhac ah, waxaana Boosaaso ka billaaban doona doorashada kuraasta Aqalka Hoose, oo suurta galnimadooda cabsi amni laga muujinayey, mudooyinkii ugu danbeeyey.
Farmaajo Iyo Fahad, ayey arrintan ku keeneysaa niyad jab hor leh, waxaana hal bacaad lagu lisay noqo doonta dhaqaalihii ay dowladda Qatar uga qaadeen, hurinta xiisada Boosaaso, waana waji cusub oo ay yeelaneyso xaaladda Boosaaso, oo in muddo ah loo caal waayey.